प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
० मधेशवादको राजनीतिलाई छोडेर कम्युनिस्ट राजनीतिमा आउनुको कारण के हो ?
— म मधेशवादी भन्दा पनि भेदभाव विरोधी आन्दोलनमा लागेको व्यक्ति हुँ । मधेशका नागरिकमा विगतका दिनहरूमा जसरी भेदभाव भइरहेको थियो त्यो अन्त्य होस्, जुन परिवर्तन भइरहेका छन् त्यसलाई आत्मसात गर्न मधेशका सम्पूर्ण भागका नागरिक र सबै समुदायले त्यो अनुभव गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यका खातिर विगतमा मधेशवादी भने पनि परिवर्तनकारी शक्ति भने पनि समानता समाजको निर्माण गर्न अभियन्ताको रूपमा आन्दोलनरत थिएँ र त्यो भावना मेरो मनमा अहिले पनि छ । त्यसैले यो देशका सबै नागरिकले समान हकको उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु र भोली पनि रहनेछु । दलको स्वरूपमा परिवर्तन भएको हो । मैले के महशुस गरें भने म जहाँ थिएँ त्यस दलले परिवर्तनलाई जुन किसिमले आत्मसात गर्नुपर्ने हो त्यो हिसाबमा नगरेको अनुभूति भयो । ठूलै शक्तिसँग मिलेर परिवर्तनको अनुभूति गराउने, समातामूलक समाजको निर्माण गर्ने र मधेशको मुद्दालगायत सम्पूर्ण भेदभाव विरोधी आन्दोलनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरेको हो ।
० तपाईंका उद्देश्यहरू पूरा गर्न तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट सम्भव थिएन ?
— त्यसबाट मैले सम्भव देखिन । साना–साना कुरामा अल्झिने, व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने प्रवृतिले मधेशको मुद्दा र भेदभाव विरोधी विषयवस्तुलाई जुन उचाईमा पु¥याउनु पर्ने थियो नेतृत्व वर्गले त्यो पु¥याइएन । त्यो काम अहिले पनि बाँकी नै छ । अहिले पनि प्रयत्नरत नै छ । मैले त्यो मुद्दालाई बिर्सेको छैन ।
० तपार्ईं तत्कालीन माओवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो, त्यो पार्टी मधेशप्रति इमान्दार छ ?
— निश्चित रूपमा यो देशमा जति पनि पार्टी रहेका छन् तिनीहरूको तुलनामा अपेक्षाकृत पार्टी मधेशप्रति उदार देखिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र नै हो । यो पार्टी मधेशवादको पक्षमा र भेदभाव विरोधी आन्दोलनको पक्षमा थियो । मधेश पनि यहि देशको अंश हो, मधेशी पनि यहि देशको नागरिक हो । त्यसैले उनीहरूले जुन किसिमको अनुभूति गरिरहेका छन्, त्यो अनुभूतिलाई हटाउनुपर्छ र मूल प्रवाहमा सम्पूर्ण समुदायका मान्छेहरू र पहाडका जनजातीहरू, जो भेदभावमा परेका छन्, मधेशका मधेशीहरूलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा माओवादी केन्द्रले व्यवहारमा नै देखाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
० माओवादीकै कारण मधेशमा आन्दोलन भयो, अन्तरिम संविधान लेख्ने समयमा जब संघीयता छोडियो तब मधेश आन्दोलन उठेको थियो त्यस समयमा पनि माओवादी केन्द्र कीिह बोलेन त ?
— संघीयताको पक्षमा सबैभन्दा पहिले कुरा उठाएको नेपाल सद्भावना पार्टीले हो । गजेन्द्र बाबुको नेतृत्वमा रहेको सद्भावना पार्टीले संघीयता र आरक्षणको विषय हामीले उठाएका थियौं । माओवादीले संघीयता छोडेको अनुभूति भएको छैन । माओवादी केन्द्रले अहिले पनि संघीयतालाई दह्रो किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाइन मै छ । अहिले पनि सहकर्मी केही साथीहरूले संघीयता देशलाई भार हुन्छ, यो देशलाई टुक्राउने खेल हो भन्ने जस्ता कुरा गरे पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले संघीयताको पक्षमा वकालत गरेको छ । अहिले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले संघीयतालाई आत्मसात गर्दै सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने नै धारणा रहेको छ ।
० एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको छ, अहिले नेकपाको मधेश नीति कस्तो देख्नुहुन्छ ?
— हिजोको दिनमा भन्दा प्रष्ट दिशाबोध र अलि फराकिलो सोचका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अगाडि बढेको छ । किनभने नेकपा पार्टी ऐतिहासिक मोडमा छ । अहिले नै जुन शक्तिको रूपमा यो पार्टी अगाडि बढेको छ, यो शक्तिलाई कायम राख्न यो देशमा रहेको एक किसिमको भेदभावलाई अन्त्य गर्ने प्रयास हुन्छ र यो राजनीतिक र व्यवहारिक दुबै दृष्टिकोण बाहेक अन्य विकल्प छैन । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण के छ भने स्पष्ट बहुमतको सरकार हुँदा–हुँदै एउटा भेदभाव विरोधी आन्दोलनको पात्र वा मधेशवादी पार्टीको रूपमा आफूलाई कायम गराउन सफल भएको उपेन्द्र यादवजीको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने र अन्य दलहरूलाई पनि सरकारमा ल्याउने जुन प्रयासहरू भइरहेको छ यो एउटा सकारात्मक सोच हो । यो एउटा प्रमाण हो कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अब पनि भेदभावमा परेका समुदायलाई छोड्यो भने आफू कमजोर देखिन्छ । त्यसैले कुनैपनि हालतमा सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता महशुस भयो भने तिनीहरूको सहमतिमा नै संविधान संशोधन गरेर भए पनि नाराका रूपमा रहेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल चरितार्थ हुनेछ । यो सम्पूर्ण प्रयासहरू जारी नै छन् ।
० त्यसो भए संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउनु मधेशको पक्षमा हो ?
— त्यतातिर पनि उन्मुख छ । नेकपाले आफ्नो बहुमतको सरकार हुँदा–हुँदै पनि सबैलाई समेटेर देश विकासमा लाग्ने अठोट गरेको छ । त्यो अठोटलाई व्यवहारमा उर्तानका लागि मधेशमा भएका दलहरूलाई सहकर्मीको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।
० मधेशका मुद्दाहरूलाई उठाउनका लागि संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याइयो तर राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई भने किन बाहिर राखिएको हो ?
— राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारमा आउन प्रयासरत छन् । तिनीहरूको नेतृत्वमा विवाद छ । धेरैको नेतृत्व रहेकोले मत एकाकार हुन सकिरहेको छैन । तर राजपाका अधिकांश साथीहरूको चाहना सबैसँग मिलेर नै जाउँ भन्ने रहेको छ । केही साथीहरू सरकारमा जाउँ भन्ने पक्षमा छन् भने केही साथीहरूको धारणा सरकार बाहिर बसे पनि सरकारलाई समर्थन गरेर जाउँ भन्ने छ । त्यसैले मलाई लाग्छ, निकट भविष्यमा नै उहाँहरू पनि नेकपाको सरकारमा सहभागि देखाएर अगाडि बढ्नुहुनेछ ।
० तर मन्त्रालयहरू त खाली छैन कसरी उहाँहरूलाई प्रवेश गराउनुहुन्छ ?
— सम्पूर्ण सरकार नै नेकपाको भएकाले कसलाई सरकारमा राख्ने कसलाई हटाउने पार्टीले निर्णय गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी एडजस्ट गर्नेछौं ।
० आफ्ना मन्त्रीहरूलाई नेकपाले फिर्ता पठाउन सक्छ ?
— फिर्ता पठाउने वा राख्ने भन्दा पनि तत्कालीन परिस्थितिमा जसको आवश्यक्ता थियो त्यसलाई अगाडि बढाइयो र भोलिका दिनमा पनि जसको आवश्यक्ता रहन्छ त्यसलाई अगाडि बढाइन्छ । सरकार भनेको अपरिवर्तनशील होइन । यसमा आलोपालो त भइरहन्छ ।
० मधेश केन्द्रित दलका माग पूरा गर्न भन्दा पनि सरकारमा ल्याउनमा नै सरकार लागेको देखिन्छ, आफ्नो माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने भनेर राजपा स्पष्ट श्रपमा भनिसकको छ, सरकारले माग पूरा गर्न किन ढिलाई गरिरहेको छ ?
— उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ । सरकारमा हुनु भनेको मन्त्री हुनु नै होइन । उहाँको समर्थनमा सरकार बनेको छ । संघीय समाजवादी फोरमको दुईजना मात्र मन्त्री छन् तर अन्य त छैनन् नि ? तर फोरम नेपाल सरकारमा छ । राजपाको पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व छ । मन्त्री हुनु भनेको त एउटा प्राविधिक विषयमा सामेल हुनु हो । कसको आवश्यक्ता पर्छ, त्यस व्यक्तिलाई पार्टीबाट निर्णय गर्नेछ । भोलिका दिनमा राजपाको आवश्यक्ता भयो भने नेकपा त्यसमा पछाडि पर्दैन, तिनीहरूलाई पनि समेटेर लैजान्छ । सरकारमा त उहाँहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ ।
० तर उहाँहरूको माग किन पूरा भइरहेको छैन ?
— उहाँहरूले गरेको माग भनेको संविधान संशोधन हो । नेकपाले पनि संविधान संशोधन गरेर लैजानुपर्छ भनेकै छ । यसको औपचारिकता मात्र बाँकी छ । संघीय समाजवादी फोरमसँग जस्तै उहाँहरूसँग पनि सम्झौता हुनेछ र त्यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आगामी दिनमा पहल हुनेछ ।
० मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाटै हुने सामान्य मागहरू जस्तै सांसद रेशमलाल चौधरीको शपथ, आन्दोलनका क्रममा झुठा आरोप लागेकालाई सफाई र कैदी जीवन बिताएकालाई रिहाई जस्ता विषय पूरा गर्नका लागि त सरकारमै ल्याउन पर्छ भन्ने त छैन नि ?
— तपाईले जति पनि मागहरू छन् भन्नुभयो ति मागहरू अझै पनि राजपाले उठाउँदै आईरहेको छ । र सरकारले पनि यो कुरा उठाइरहेकै छ । समय मात्र नमिलेको हो । मधेश आन्दोलनको क्रममा मधेशले ठूलो क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसको मर्म हामी सबैले बुझेका छौं । त्यो मर्ममा मलम लाउने काम हामी सबैले गर्नुपर्छ । त्यसमा नेकपा नेतृत्वको सरकार धेरै नै सकारात्मक छ । यसमा पहल गर्न अझै पनि बाँकी नै छ । म राजापाका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मोहि माग्ने ढुंग्रो लुकाउने काम नगरौं । सम्पूर्ण कुराहरू खुलेर गरौं । नेकपाका साथीहरूलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने धेरै समय यस्ता कुराहरूलाई थाती राख्न हुँदैन । यस्ता कुराहरूलाई तुरून्तै निकास दिने र सबैलाई समेटेर देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने र त्यो समृद्धितर्फ लैजानका लागि सम्पूर्ण निकायहरू अगाडि बढ्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : २०७५ साल असार ८ गते शुक्रबार ।